calamada November 18, 2016 1 min read
Wararka naga soo gaaraya Sh/hoose ayaa sheegaya in weeraro dhabagal ah lagu beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada Kufaarta Afrikaanta oo ku socdaalayey wadada isku xirta Danoow iyo Buula-Mareer sida ay noo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan Mujaahidiinta.
Weeraradan waxaa lagu beegsaday Kolonyo ka tirsan ciidamada Kufaarta Afrikaanta oo maalma ka hor ka soo ambabaxay magaalada Muqdisho kuwaas oo galbinayey gurmad loo waday ciidamada Kufaarta ee ku sugan Baraawe.
Ugu yaraan afar weerar oo dhabagal ah ayaa ciidamada lagula eegtay wadada u dhexeysa Danoow iyo Buula-Mareer, waxaana la sheegay in qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac uu halkaas ka soo gaaray cadowga.
Weerarkii ugu horeeyey waxa uu qabsaday daqiiqado un ka dib markii ay ka soo ambabaxeen deegaanka Danoow ayna u soo jiheysteen dhanka dhanka Buula-Mareer.
Weerarada ayaa isugu jiray kamaaâ€™in iyo qaraxyo, waxayna dhamaantood ka dhaceen inta u dhexeysa deegaanka Danoow iyo degmada Buula-Mareer.
Wariyaha Idaacadda Andalus ee Sh/hoose ayaa soo sheegaya in ciidamada cadowga ee la beegaday ay weli ku sugan yihiin agagaarka goobihii ay weeraradu ka dhaceen, islamarkaana aysan weli soo gaarin degmada Buula-Mareer.
Previous: Gaari Beebo Ah Oo Lagu Gubay Duleedka Kismaayo.
Next: Dhageyso: Barnaamijka Booqashada Andalus Oo Lagu Booqday Furimaha Hore Ee Sh.Hoose.